Sideen Ugu Guulaysan Karaa Pinterest? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Waxaa laga yaabaa 12, 2021 0 comments 478
Pinterest waa barxad maanta dadka siinaysa rukhsad ay ku muujiyaan waxa ugu fiican uguna riyoodaan mashaariicda mustaqbalka ee ay doonayaan inay gaaraan. Waxaas oo dhan muujinta dulqaadashada waa lagama maarmaan laakiin wax walba ka sarreeya, shaqada kooxeed ee shaqeyn doonta iyada oo ah hab muhiim u ah guusha.
In kasta oo aaladaha kale ay ku weydiinayaan inaad ka soo muuqato fiidiyowyada ugu yaraan 10 ilbiriqsi gudahood bogagga midkood, Pinterest lidkeeda ayaa dhacaya. Mid ka mid ah waxyaabaha ay dadku xiiseynayaan inay ku guuleystaan ​​shabakadda waa inay u abuuraan fursado iyo fikrado bulshada.
Dadka fiiriya ikhtiyaaraadka Pinterest waxay u arkaan sida ugu fiican naftooda si loo dayactiro guryahooda, goobaha shaqada iyo xitaa bilaabista mashaariic shaqsiyeed. Waxaas oo dhan mahadsanid, wax kasta oo lagu arko barxadda waa la dhaqangelin doonaa.
Ku guuleysta Pinterest
Isticmaalayaal badan ayaa muujiyay taas Pinterest waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu fiican taasi waxay ahayd inay fuliso riyada iyo fikradaha dadka isticmaala maanta. Tan iyo markii la abuuray, ma awoodo inay ogaato halganka ay ku hayso inaysan la mid noqonayn shabakadaha kale iyadoo taas laga duulayo, laga fogaado dhibaatooyinka mustaqbalka.
Markan, wax yar ayaad ka baran doontaa sida loo hagaajiyo tayada waxa lagu sameeyo gudaha Pinterest iyo wixii ka sarreeya, sida aad uga hor mari lahayd dhammaan waxyaabaha hal-abuurka ah ee ay tahay inaad ku raaxaysato.
La falgal shabakadaha kale
Waxay kuxirantahay howlaha la bilaabi doono Pinterest iyo wixii ka sareeya, sawirada ay tahay inay horumariyaan, waa fikrad fiican in la dhigo hawlgalka furayaasha isku xirnaanta.
Fursadani waxay soo dhaweyn doontaa isticmaaleyaasha kale si ay u arkaan dhammaan waxyaabaha cusub ee ay tahay inay ku bixiyaan waqtiga saxda ah. Intaas waxaa sii dheer, xayeysiinta ayaa imaan doonta waqti walba iyo goob walba si natiijooyin wanaagsan looga gaaro.
Haddii aad rabto dadka kale inay kaa helaan matoorada raadinta, waxaa laga yaabaa inaad wax ka beddesho URL-ka si aad u hesho natiijooyin wanaagsan. Halkaas, dadku waxay ka heli doonaan buuxa ka soo gal meel kasta oo ka mid ah bartaada Pinterest.
Markaad abuureyso sabuurad, ama aad si fudud u sameysid biinamo cusub waxaa si aad ah lagama maarmaan u ah inaad sharaxaad ka bixiso Tani waxay ka caawin doontaa adeegsadayaasha inay ogaadaan halkaad ka timaaddo iyo halkaad u socoto adigoon habeynin oo aadan helin waxay rabaan ama aysan haysan.
Sidoo kale waa fikrad wanaagsan in la hirgaliyo dhammaan aqoonta SEO aad heli karto ama aad rabto inaad hesho. Shaki la'aan, taas awgeed, dad badan ayaa kaa heli kara masraxa.
Maxaa aan lagu sameyn Pinterest?
Hadda, waa muhiim inaad ogtahay waxayaabaha aan uqalmin kaqeybgalka Pinterest.
Waa inaad iska ilaalisaa inaad ku dhajiso sawirro anshax xumo ah ama xasaasi ah Pinterest
Kama xumaan kartid dadka isticmaala barta
Waa lagama maarmaan inaad ka jawaabto dhammaan fariimaha ku jira gudaha Pinterest
Biinanka la wadaagayo waa inay ku jiraan loox si loogu abaabulo si wanaagsan
Koontadaada si joogto ah ayaa dib loogu eegi doonaa si loo ogaado waxqabadyada
1 Ku guuleysta Pinterest
1.1 La falgal shabakadaha kale
1.2 Habee URLkaaga
1.3 Qeex sawiradaada
2 Maxaa aan lagu sameyn Pinterest?